log: မာတင် Vrijland
username သို့မဟုတ် e-mail,
Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, stateပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနှင့်အင်တာနက်ပိတ်ခြင်း?
လိင်ကွဲယောက်ျားများသည် coronavirus ၏အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်ပါသလား။ သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံ
ကင်မရာ2op Trump, Q-Anon နှင့် 'deepstate clean up' ဒဏ္myာရီ (Robert Jensen, Janet Ossebaard)
ZalmInBlik op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, stateပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနှင့်အင်တာနက်ပိတ်ခြင်း?
ဟယ်ရီအေးခဲ op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, stateပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနှင့်အင်တာနက်ပိတ်ခြင်း?
အနာဂတ် op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, stateပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနှင့်အင်တာနက်ပိတ်ခြင်း?